Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ndị isi na-eme ihe nkiri kachasị mma
Uru izizi nke UV bụ ebe a na-emegharị ya na ntinye ego nke mbụ achọrọ maka usoro ọgwụgwọ UV, nke na-efu pasent 80 na-erughị ikuku ikuku na-ekpo ọkụ. Offọdụ uru ndị ọzọ dị mkpa na-aba ụba na ngwaahịa, ogo ngwaahịa na usoro ngwaahịa. -N'ekwu maka mkpochapu nke ihe na - emerụ ahụ na - emerụ ahụ (olu)
Eziokwu nke okwu ahụ bụ na mgbe ị na-atụle n'ahịa ụlọ ọrụ gị, ị ga-enwerịrị onye ị họọrọ. Ihe ngosi ị họọrọ iji kwado ụlọ ọrụ gị ọ bụghị naanị iji gosipụta ụlọ ọrụ gị, kamakwa iji dọta ndị ahịa nwere ike. Nke ahụ bụ ihe mere ị ga - eji nweta akara ngosi nke na - abụghị naanị ngwọta kachasị mma maka iji mpụga ụlọ ahịa gị, kamakwa ọ ga - eme ya nke ọma.